Ungayisebenzisa kanjani i-HDR yekhamera ye-iPhone yakho | Ngivela kwa-mac
Ungayisebenzisa kanjani i-HDR yekhamera yakho ye-iPhone
HDR imele i-High Dynamic Range futhi isebenza ngokuthwebula ukuvezwa okuthathu okuhlukile kwesithombe esifanayo esihlanganiswa sibe isithombe esisodwa. Lokhu kungaba wusizo olukhulu lapho isihloko sakho esithombeni sifaka ukukhanya okuhlukahlukene nesithunzi futhi ufuna imininingwane yezingxenye ezimnyama kakhulu zesithombe zibonakale ngaphandle kokuveza ngokweqile lezo zingxenye ezilula.
I-HDR ku-iPhone yakho
Ukukhetha, noma ukukhetha, le modi ilula njengokuyenza kusuka kubha yemenyu ephezulu yohlelo lwakho lokusebenza lwekhamera. iPhone; khetha i-HDR ivuliwe noma i-HDR icishiwe ukwenza noma kusebenze ukusetshenziswa kwazo ngokulandelana ngesikhathi se- thatha isithombe. Ungakhetha futhi imodi I-HDR ezenzakalelayo uma okufunayo yikhamera ye-iPhone uqobo ukunquma ukuthi kufanelekile yini ukuyisebenzisa ngaso sonke isikhathi.
Uma ufuna ukwazi ukuqhathanisa umehluko phakathi kwezithombe ezijwayelekile kanye HDR, iya kuzilungiselelo → izithombe nekhamera, skrolela phansi bese wenza kusebenze isilayida esithi "Gcina isithombe esijwayelekile" ngaphambi kokuthi uqale ukuthatha izithombe. Zombili izinhlobo, i-HDR ne-non-HDR, zizogcinwa kwifilimu ye-iPhone yakho ukuze ukwazi ukuziqhathanisa.
Njengoba besifundisa kusuka Impilo ye-iPhone, Imodi ye-HDR ye-iPhone ibuthakathaka kancane. Awukwazi ukubona umehluko phakathi kwesithombe se-High Dynamic Range (kwesokudla) nesithombe esijwayelekile (kwesobunxele) kepha usabona ukuthi amafu asesithombeni kwesokudla acace bha.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungayisebenzisa kanjani i-HDR yekhamera yakho ye-iPhone
Isitolo esisha se-Apple eHong Kong futhi sibonga uTim Cook
I-Apple Music ine-akhawunti entsha kusevisi ye-Snapchat